Ahụmahụ Semalt: Olee ọtụtụ ngalaba aha ị chọrọ?
Ndị na-ere ahịa na-achọ mgbe niile ịme atụmatụ ịmepụta ihe dị iche iche iji nọrọ n'ihuasọmpi ma chebe ha. Na e-azụmahịa na-enweta oge, azụmahịa na-adabere na atụmatụ a ugbu a karịa mgbe ọ bụla. A na-emekarịnke a na-agbasa ugbu a n'ahịa bụ na ndị nwe ụlọ ahịa na-azụta ihe niile nsụgharị nke ngalaba aha maka ụdị ha - equipment valuation guide.
Ma olee ole ngalaba aha ị chọrọ n'ezie iji bulie anya gị ma kpuchie gị ika? Onye ọkachamara nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Max Bell na-enye azịza ọsọ ọsọ maka ajụjụ a.
Ịnweta ọtụtụ aha ngalaba nwere ike ije ozi dị ka ihe onwunwe ma ọ bụ ụgwọ. Na-ejide ọtụtụngalaba aha dị ka akụnụba na-enye gị ohere iji chekwaa ụdị aha ngalaba ahụ site na iji ndị asọmpi gị. Na SEO gbasara ya, ọ na-enyekwa gị ohere inwetaniile kachasị mkpụrụ osisi. Ọ bụ ezie na uru ndị a nwere ike ịnye gị ntaneti n'Ịntanet, ọ nwere ike itinye ụgwọ na.
Ebe ọ bụ na a ga-eji mpaghara gị niile rụọ ọrụ, engines ịchọpụta nwere ike ịkọwa ha dị ka ihegbalịa Spam nke a na - akpata ntaramahụhụ siri ike gụnyere nke na - adịghị mma. N'okwu a, ndị ọkachamara SEO kwadoro ịkwado azụmahịa niilengalaba aha na saịtị ndị metụtara na otu ebe nrụọrụ weebụ siri ike. Nke a na-eme ka ike nke ọ bụla na ngalaba aha na-etolite otu ike na ngalaba aha ahụ bụdị ike iji bulie elu n'omume nyocha niile ziri ezi n'emebighị ọkwa dị na mbụ. Njikọ na-achọ ịkwado ihe300 redirects na-adịgide adịgide site na ngalaba isi gaa na ngalaba mbụ, ọrụ dị mfe nke ezigbo ọkachamara SEO ma ọ bụ onye nchịkwa weebụ.
Njikọ na-adịghị ala
Ngalaba aha niile e debara aha na-enweta obere mma njikọ site n'oge ruo n'ogeibugharị ha, ha na-ebute na àgwà dị ala ndị dị otú ahụ na-akpata ndepụta dị ala na engines ọchụchọ. Iji mee nke a, jiri Majestic ma ọ bụNchịkọta Njikwa Google iji nyocha ma weghasị obere njikọ dị mma n'ihu redirecting. Ejiri ederede ederede na aha nke ala dị alaezigara na search engine iji kpochapụ nsogbu a.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọtụtụ ngalaba aha ị nwere karịa mmefu ị na-agana-eweta n'ụdị mmeghachi ụgwọ kwa afọ. Otu aha ngalaba na-akwụ ụgwọ n'agbata $ 10-35 iji na-agba kwa afọ n'emeghị ihe na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ.Mee ka nke a na ọnụ ọgụgụ nke ngalaba aha gị ma ị ga-ele anya ọnụ ọnụ.
Ikike Nchebe site na ọtụtụ ngalaba
Ndị ọkachamara SEO chere na a pụrụ ịchebe nchebe dị n'ekwughị azụotutu ngalaba aha. Buru n'uche na nchịkwa mpaghara na-agbaso iwu ndị doro anya na nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere akara ụgha maka otungalaba aha, ị nwere ike ịlụ ọgụ ma gbaghachite ngalaba gị ma ọ bụrụ na onye ọzọ na-edebanye aha ọzọ na-agụnye ụghalaahia gị. Enwereọtụtụ ngalaba aha iwu ndị ọkàiwu na ndị ọkachamara n'ebe ahụ na ihe ọmụma na Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Otú ọ dị, usoro a nwere ikeenwe nkụda mmụọ ma na-ewe oge.
Were oge gị na omume SEO na ịmepụta. Dị ka anyị tụlere n'elu, inwe otutungalaba aha nwere ike ịba uru na mkpirikpi oge ma ọ dị oke ọnụ na ogologo oge. Ụzọ kachasị mma iji zere mmejọ bụ ịjụ ahụmahụ ọkachamara SEO .